भण्टा खाने गर्नु भएको छ भने यो अवस्य पढ्नु होला ! जानकारी का लागि शेयर गर्नुहोस – MeroOnline Khabar
काठमाडौं,भन्टा हेर्दा आकर्षक देखिने गर्छ । गर्मीको समयमा पाइने तराकारीहरु मध्ये यो पनि एक हो । यो खानको लागी पनि निकै स्वादिलो हुन्छ । यसलाई हामी तरकारी को रुपमा वा कहिलेकाँही अचारको रुपमा पनि खाने गर्छौं । भन्टा जति स्वादिलो छ ।
२. मुटुरोग लाग्नबाट बचाउँछ : भन्टाको नियमित सेवनले कोलेस्टेरोलको तहलाई घटाउन सहयोग गर्छ ।
यसका साथै रक्तचापलाई स्थिर गर्न मद्धत गर्ने भएकाले मुटुको रोग लाग्ने सम्भावनाकम गर्छ । यसमापाइने पोटासियमका कारण शरीरलाई हाइड्रेट राख्छ
४. आइरनको उत्पादनमा सहयोग गर्छ : हाम्रो दैनिकजीवनलाई सहजपार्न शरीरमा आइरनको तत्व पनि आवश्यक हुन्छ ।
← अब एकपटक मलाई जिताउँन अब मेरो लागि अन्तिम पटक सेयर गरिदिनु न प्लिज” : प्रितम आचार्य
नेपालले गुमाएका भु-भाग किन फिर्ता नहुने ? सन १९५० को सन्धिको धारा ८ अनुसार ६० हजार हेक्टर जमिन भारतले फिर्ता गर्नै पर्छ भन्ने सम्पुर्ण नेपालीले सेयर गरौ →